Izikhwama zeeans ngezandla zabo
Inye enye yeempawu ezicekisayo. Kwaye ukuba ngumbuzo wokwandisa ubomi bezinto zakudala, ngokokuqala indawo ayikuphela nje kobutyebi, kodwa ubuchule kunye nokucinga. Emva kwakho konke, qingqa indlela yokunika izinto zakho ezintandokazi endala ubomi obutsha-kuxabiseke kakhulu. Ngokungathandabuzekiyo, kukho izinto ezinjalo xa ungacingi ukuba ucinge ngendlela ongayenza ngayo. Impendulo ngokukhawuleza ihleli phezu komhlaba. Kuze ungacingi nto into. Isibini esichukumisa ngeesisi, umsebenzi omncinci kunye nenaliti kunye nomtya, ezimbalwa izibonda zokugqibela zolwakhiwo oluchanekileyo, kwaye ngoku unento entsha enomtsalane kwaye ukhangela iso.
Enye yeenguqulelo ezibonakalayo zikhupha iingxowa zeeans ezindala ezingadingekile. Kwaye, inene, izikhwepha, ungatsho, sele ulungele isikhwama. Kuhlala ngoncedo lweendlela ezilula kunye nokulala kwesandla ukwenza into entsha. Yaye ezi ngxowa zenziwa ngokuhlukileyo kwaye zenzelwe iinjongo ezahlukeneyo. Ufuna ukwenza isikhwama kwikhompyuter yakho. Ngokuqhelekileyo uye kwindawo elunxwemeni - yenza ulwandle. Yaye ukuba uthe wenza umgudu omkhulu kunye nomonde, kunokwenzeka ukuba wenze isikhwama esihle senkosikazi, esingayi kuba nabani kwisithili. Indlela yokuphumeza lo msebenzi? Masifunde kwinqaku.
Iphepha le Laptop
Ukuba usondela kwinkqubo ngobuchule kwaye ugobe isikhwama kuwe, kungcono ukuba ube neenguqu zalo mfundi, ngoko umphumo ungabi mbi ngaphezu kokuthengwa. Into yokuqala yokuyenza ithatha i jeans endala, ukuba kungenjalo, yithathe kumhlobo, uhlambe kwaye uyibambe. Emva koko, phindela ngaphakathi kwaye usasaze kakuhle kwitafile. Ngoku ngokunjalo unqumle imilenze emibili kunye nezantsi kwee jeans. Kufuneka kube yimfutshane. Emva koko kuyimfuneko ukutshiza phantsi kweengubo kwisangqa. Ukujikeleza kufuneka kwenziwe kwinqanaba eliphantsi. Emva koko ubeke umgca ongqambileyo kumgca ophumela kuyo ngomshini wokuthunga uze uphume isikhwama esenziwe.
Isinyathelo esilandelayo kukunquma i-lateral longitudinal seams ukusuka kumathambo amabini. Yenza oku kuyimfuneko kwindawo apho i-jeans itywinwe khona, yenza isibane. Ziza kuba yizibambo zesikhwama. Kwiindawo ezikufutshane namacala, phantsi kwebhanti, yenza izimbobo ezine zokuphatha. Ububanzi bawo abufanele kudlule ububanzi besibane. Emva koko, ukusuka ngaphandle, udlulise isibambo sibe yimingxuma emibini ekupheleni kunye nasekungaphakathi, gxininisa amaqhina amaninzi ukuze amaqhina angabopha. Ngendlela efanayo, kufuneka wenze isingatha sesibini. Yonke into. Ingxowa ye laptop yakho ikulungele! Kuhlala kuphela ukuyisebenzisa ngokusebenzayo.
Ibhokisi elinombamba omde
Ukususela kwiimfesane eziye zakhonza kuwe ngokuthembeka, unokwenza isikhwama esikhethekileyo sesekhwalithi kwiinjongo zakho. Ukuqala ngento elula - sinqumla i-leggings kwi-jeans, sichitha, uze uyisitye. Ngoku ufanele udilize iingqameko zangaphakathi zeebhulukhwe uze uzibethe, ngelixa ujikeleza indlela yokuqhuma. Kufuneka ufumane iziqendu ezimbini kwipateni elandelayo. Ubanzi besikhwama esizayo kunye nobude beepenki zalo kuya kuxhomekeka kubukhulu bezi khankanyi. Ngoku kuyimfuneko ukwenza umzobo weekhwama ezi-2 eziqinileyo zebhegi: inxalenye yokuqala ingaphandle kwesikhwama, kunye nenxalenye yesiphathi. Inxalenye yesibini yiyo yonke into yokuphatha kunye ngaphakathi.
Umzekelo kufuneka ufanane nesipokethi semisi esezantsi. Ikhoneni elingaphezulu lepokothini linyanzeliswa kwaye i-handle isenziwa kuyo - ibhande, ngokuchanekileyo, isiqingatha sayo. Ngoku kuyimfuneko ukutshintshela iphethini kwindwangu kwaye unqumle iziqendu ezimbini ezifanayo kuyo. Kule meko, iifom ze-handle zivela kumacala athile-enye ngakwesokudla, enye-ngakwesobunxele. Emva koko, sigcina ingqalelo kwiindawo ezingezantsi ze nxalenye. Sifaka ii-tucks ezi-2 nganye, ukwenzela ukuba isikhwama sakho sefestile singaphenduli. Siyichitha kumshini wokuthunga. Emva kokuba ezi nkcukacha zibini kufuneka zifakwe ngaphakathi kunye ne-zastrochit creped minitami, phantsi kwezibamba. Emva koko ugobole umgca kunye nemigca. Emva koko, qhagamshela i-handles kwaye ubambe ngobumnene iziqwenga.
Ukuba ufuna ukunika ingxowa ibonakale ekhangeleka, ungagungqa izinto ngaphandle uze uphule iingcambu zeendlela zokuphatha kunye neentshukumo. Unokuzibhabhisa izibambo nge-leather edging okanye zippers. Unokwenza isikhwama sibe nembonakalo ekhethekileyo kunye ne-embroidery okanye i-appliques. Unokuyihobisa isikhwama ngeempahla zengubo, isikhumba, i-drape, iirebhoni nezinye izinto.
Isikhwama se-Denim kubantwana
Nangona amafestile amancinci angazincoma ngokwabo ngeengxowa ezenziwe ngokwabo zee jeans endala. Ukuthunga isikhwama esinjalo kunye nokuqhayisa ngookhokho bakhe, awudingi ijee ezininzi njengeepokotshi zazo. Isikhwama kwiinqanaba eziliqela.
Sinqumle iipokotshi, ngokuthe ngqo kunye nezicubu ezikufutshane nazo. Ekugqibeleni, ubude bube malunga neyentimitha enye nengxenye ukusuka kumacala amabini. Ngaphakathi kweepokotshi, sinciphisa intsimbi kwaye sishiye ama-millimeters ama-millimeters of allowances kufuphi neeplanga.
Siyayihobisa iipokotshi kunye ne-appliqués okanye iimpahla ezihlukeneyo ngoku, kuba kuya kuba nzima ukuba wenze oku kwikhegi eligqityiweyo. Ukuba ufuna ukufaka iifokethi zakho esikhwameni sakho, okuvela kumacala angaphambili nasemva, oku kuya kufuneka kwenziwe ngeli nqanaba.
Ngoku kuyafuneka ukuba ulandele iipokothini zombini ngaphakathi, ufeze okanye uzibophe ngeengxowa, uze ufake umgca kumacangca engaphezulu kwesikhwama uze ukhwebe ngamacala kunye nemiphetho yengxowa, ngelixa ubeka umgca ngokuqinisekileyo kwindawo apho umgca ovela kwiipokotshi zangaphambili wawubekwa khona.
Khusela izihlalo phezulu kwesikhwama ngeempawu ezimbalwa ezifanelekileyo. Kungenziwa kokubili kumatshini kunye nangomntu. Nangona kunjalo, ukhetho olubhetele luya kunikwa umgca wendlela, kuba umshini wokuthunga awukwazi ukukhangela kule ndawo.
Ngoku ufanele wenze umphongolo wendwangu ekhupha iphoso apho ihlala khona kwiindawo zokuhlala ngapha nangapha kwesikhwamkhana.
Njengoko ubona, ijee endala azizange zijikeleze, zilindele ixesha labo. Ukwenza ibhegi kubo, njengoko kuvela, akulona nzima. Ungasebenzisa iprothebhile ngokuthe nantoni na indawo yee jeans, okanye i-trousers, nokuba iindawo eziphezulu okanye i-odnikarmany. Ukongezelela, unokugubungula iidragi ezibonakalayo, apho ungenza khona iingubo zepatchwork, uze wenze iipatheni zeengxenye kwi-ngxowa.
Ukuhlobisa ibhotile ngezandla
Eqa ephepha: ientyatyambo kwi-napkin
Indlela yokubopha i-hook crochet
I-Snowman eyenziwe ngezandla ezivela kwizixhobo ezilungelelanisiweyo zoNyaka omtsha ngezandla zakho, iiklasi zeeklasi kunye nemiyalelo yesinyathelo-nge-nyathelo
Ukukhotha intambo ngezandla zakho
Indlela yokubopha abantwana
Iipatheni ezivela kwijeans ngezandla
Andiyithandi indoda, kodwa ndidibana nayo. Yintoni endiyenzayo?
Imisebenzi yabantwana yoNyaka omtsha
Hlanganisa nge raspberries
Into enxiba ngayo uSuku lweValentine: imifanekiso yokuzonwabisa evela ku-Yana Nedzvetskaya
Ukuvelisa izityalo zendawo zangaphakathi
Awazi ukuba ungadla i-avocado? Sinikeza zokupheka ezininzi
Inhlama ye-Lenten yeepesiti ezicolileyo
Iingcebiso zengqondo yezengqondo: indlela yokufumana indoda yakho ibhinqa
Iidlo zokutya, ukutya kwerayisi
Ukuba umntwana unomkhuhlane ophezulu?
Iingcebiso zobugcisa beemifanekiso. Ukuphakama kobuhle kungcono kunezinga
I-Compote yamaapulo kunye nama-crranberries
Indlela yokwakha ubudlelwane kunye nothando lwangaphambili
Ukuxakeka kunye neengcamango kubasetyhini abakhulelweyo
Isiphumo somsebenzi welanga kwimpilo yabantu